Usoro ETABS - Geofumadas
N'ime usoro mmụta a, ị ga -enwe ike iwulite ezigbo ọrụ ụlọ na Structural Masonry Walls, na -eji ngwa kachasị ike n'ahịa dị na ngwanrọ ngụkọ nghazi ETABS 17.0.1. A kọwara ihe niile gbasara ụkpụrụ a: Iwu maka imepụta na iwu ụlọ Masonry Structural R-027. a ga -eji nke ikpeazụ tụnyere nke ...
Site na nkuzi a, ị ga -enwe ike iwulite ezigbo ọrụ ụlọ na Structural Masonry Walls, na -eji ngwa mgbako nhazi kachasị ike n'ahịa. ETABS 17.0.1 Software Ihe niile metụtara ụkpụrụ ahụ ka akọwara nke ọma: Iwu maka imepụta na iwu ụlọ Masonry Structural R-027. a ga -eji nke ikpeazụ atụnyere ...
AulaGEO na -ewepụta nkuzi a iji kwadebe ezigbo ụlọ obibi na Structural Masonry Walls, na -eji ngwa kachasị ike n'ahịa dị na ngụkọta nghazi ngwanrọ ETABS 3 A kọwara ihe niile metụtara ụkpụrụ ahụ n'ụzọ zuru ezu: Nhazi na iwu iwu ụlọ na ihe owuwu. Masonry R-17.0.1. na nke ikpeazụ ...
Ihe ọmụmụ a nwere usoro mmụta dị elu na mmepe bara uru nke Wọlọ Masonry Structural. A ga-akọwapụta ihe niile metụtara ụkpụrụ ahụ n'ụzọ zuru ezu: Iwu maka imepụta na iwu ụlọ Masonry R-027 A ga-ewepụta ihe atụ nke ụkpụrụ ndị a kpọtụrụ aha, na ebumnuche ka onye sonyere ghọta nke ọma ...